Lucidchart: Imekọ ọnụ na iji anya nke uche gị Wireframes, Gantt Charts, Usoro ire ere, Automation ahịa, na njem ndị ahịa | Martech Zone
Ihu anya bụ ihe dị mkpa mgbe a bịara n'ịkọwa usoro dị mgbagwoju anya. Ma ọ bụ oru ngo nwere chaatị Gantt iji nye nkọwa nke ọkwa ọ bụla nke ntinye teknụzụ, ngwa ahịa ahịa nke na-eme ka nkwukọrịta ahaziri onwe ya nye onye na-atụ anya ma ọ bụ onye ahịa, usoro ire ere iji hụ anya mmekọrịta ọkọlọtọ na usoro ire ahịa, ma ọ bụ ọbụna naanị eserese iji jiri anya nke uche hụ njem nke ndị ahịa gị… ike ịhụ, kesaa, na imekọ ihe ọnụ na usoro a bụ nzọụkwụ dị oke mkpa n'ime echiche na usoro mmejuputa iwu.
Ruo ọtụtụ afọ, a na-eji ngwanrọ desktọpụ siri ike dị ka Visio mee nke a, ma ọ bụ mee ya na ngwa ngosi dị ka Powerpoint. Agbanyeghị, sọftụwia desktọpụ anaghị enye ụzọ maka ndị otu dịpụrụ adịpụ, akụrụngwa na ndị ahịa. Banye Lucidchart, Ngwa eserese nke igwe ojii na-eme ka ndị otu na-eme mkpebi ka mma ma wuo maka ọdịnihu.
Lucidchart Oghere Ọrụ Anya
Lucidchart bụ oghere ọrụ a na-ahụ anya na-ejikọta eserese, nleba anya data, na imekọ ihe ọnụ iji mee ka nghọta dịkwuo elu na ịkwalite ihe ọhụrụ. Site na ngwọta nke nwere ọgụgụ isi, igwe ojii, onye ọ bụla nwere ike mụta ịrụ ọrụ n'anya na imekọ ihe ọnụ n'oge na-eme ka ọ na-ewu eserese, ịkwa emo, eserese UML, na ndị ọzọ.
na Lucidchart, ndị mmadụ n'otu n'otu na otu nwere ike mfe map eserese na nkịtị usoro ndebiri. Uru nke ikpo okwu gụnyere:
Mepụta ọhụụ nkekọrịta - Jiri anya nke uche hụ usoro, sistemu na nhazi nke otu gị ngwa ngwa. Eserese ọgụgụ isi na-enye gị ohere iji anya nke uche hụ echiche dị mgbagwoju anya ngwa ngwa, dokwuo anya na imekọ ihe ọnụ.
Nweta onye ọ bụla n'otu ibe - Asụsụ a na-ahụ anya na-eme ngwa ngwa ma na-akwalite nzikọrịta ozi. Ngwá ọrụ na-abịa na nsụgharị, nkọwa-ụdị, mkparịta ụka n'ime-edezi, onye na-ede akwụkwọ ozugbo, cursors na-emekọ ihe ọnụ, na ọkwa.
Weta atụmatụ na ndụ - Lucidchart na-enye gị ohere ịnọgide na-elekwasị anya na sprint na-aga n'ihu na nzube. Weta atụmatụ ndị ga-akwalite azụmahịa gị.
Ikpo okwu bụ ebe nchekwa akwụkwọ dị njikere maka ụlọ ọrụ nke jikọtara ya na ya Oghere Google, Microsoft, Atlassian, Slack, na ndị ọzọ.
Ngwa ahụ siri ike nke ukwuu nke na m ga-eji ya maka nhazi waya. Ha na-enyekwa ikike ịgbakwunye eserese nhazi, iPhone mockups, eserese UML, eserese netwọkụ, maapụ uche, maapụ saịtị, eserese Venn, na ndị ọzọ.
Lucidchart na-enyere anyị aka n'ile anya dozie nsogbu ndị dị mgbagwoju anya site na ịmepụta eserese ụkpụrụ ụlọ na eserese na-emepụta ihe na-eme ka ndị otu anyị kesara bilie ngwa ngwa na codebase na sistemụ. … Ọ na-enye ohere ka otutu ndị otu otu aka imekọ ihe ọnụ n'otu oge, na-eme ka ọ dị mfe na-arụ ọrụ gafee a n'ụzọ zuru ezu ekesa otu.
Ịmalite dị mfe ma enwere ọtụtụ akụrụngwa na ọwa YouTube ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite iji ikpo okwu. Ikpo okwu nwekwara ngwa mkpanaka na mbadamba na iOS na gam akporo.
Debanye aha n'efu!
Ngosi: Abụ m mmekọ Chart nke Lucid na m na-eji njikọ ahụ n'isiokwu a yana njikọ njikọ ndị ọzọ.
Tags: mmekotanjem ndị ahịaeserese ngosiagba mmirigantt chartndukweusoro nkewaakụrụngwa ahịaUchechiusoro erubausoro nkewausoro ire ereotu mmekotaEserese UMLanya ọrụ oghereoghere ọrụ anyawaya isi